स्वस्थ्य Archives - Page3of 23 - Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
वाई क्रोमोजोम पुरुषत्वको प्रतिक मानिँदै आएको छ । तर, यो त्यति बलियो र टिकाउ नरहेको कुरा पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । यसमा लिङ्ग निधारण गर्ने एस.आर.वाई. नामक जीन रहे पनि अन्य खालका जिन थोरै रहने गर्छ । र, यो जीवनको अस्तित्वको लागि नभए नि हुने एक मात्र क्रोमोजोम हो । सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको वाइ…..
तपाईंको माक्सले कति प्रदूषण रोक्छ ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने रुपरङ नै फेरिएको छ । धुवाँधुलोले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पारिरहेको छ । उत्यकाबासीका लागि वायुप्रदूषणबाट बच्ने मुख्य उपाए भनेको मास्क प्रयोग गर्नु नै हो । योभन्दा अन्य विकल्प पनि त छैन हामीसँग । धूलो धुवाँ झन् काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था हेर्ने हो भने बाहिरी जिल्लाको भन्दा…..
सावधान ! आठ घण्टाभन्दा कम सुत्नेलाई डिप्रेसनको खतरा
सान फ्रान्सिस्को – दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा (डिप्रेसन)को समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको विघम्टन विश्वविद्यालयलले हालै गरेको एक अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लागेको जनाएको थियो। Feeling blue सुत्ने समयावधि र मानसिक अवस्था बीचको सम्बन्धको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कम सुत्नेमा बढी मानसिक समस्या र चिन्ता…..
चटपटे पानी पुरी खानुहुन्छ ? यो हेर्नुहोस यसरी बिष खादै हुनुहुन्छ
तपाईले सडक पेटीमा ठेलागाडामा राखिएका चटपटे र पानीपुरी खाने गर्नुभएको छ? छ भने सावधान रहनुहोला। किनकी त्यसमा स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने खालका हानिकारक तेलको प्रयोग गरेको पाइएको छ।आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो। आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा खबर छ ।विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलको नेतृत्वमा…..
Page3of 1 « Previous 12345 … 23 Next »